Qaybta Qaboojiyaha Gawaarida Isku-dhafan ee Front Mounted
Qeybta Qaboojiyaha Gawaarida Tamarta & Tamarta Cusub
Qaboojiyaha Baabuurka Rakaabka
Sannadka cusubi wuu bilaabmaa, sannadka dibigu waa nasiib
23-ka Febraayo 2021, safarka cusub ayaa hadda bilaabmaya. SONGZ waxay wadaagaan Huaning Road Plant iyo Zhuanxing Road Plant oo la keenay maalinta ugu horeysa ee shaqada dib loo bilaabayo. Iyadoo la maqlayo dhawaqa salaanta sanadka cusub, ayaa aasaasaha Mr. Fuquan Chen iyo Madaxweynaha Mr. Ankang Ji, oo ay weheliyaan shirkada dhexe iyo s ...
Nasiib wacan sanadka cusub, oradka goolasha cusub ee sanadka 2021
Dhawaqa burcadka ayaa ahaa mid sagxadda oo dhan taagnaa, oo soo dhoweynayey bilowga sannadka cusub. Bishii Febraayo 23, 2021, qoryaha dabka lagu rido ee iridda shirkadda, dhawaqa qoryaha iyo ducooyinka, waxay ka dhawaajiyeen hoonka bilowga sanadka cusub. Kadib, kooxda hoggaanka waaxda ganacsiga ...
Qaybta Transit Transit SONGZ waxay dhaaftay FAI mashruucii Shanghai Alstom M-SH6822
Bishii Janaayo 22, 2021, SONGZ Qeybta Transit Transit waxay aqbashay baaritaanka ugu horreeyay ee badeecada mashruucii ugu horreeyay ee dayactirka ee Shanghai Line 6 ee Shanghai Alstom. Kulankii ugu horreeyay, Yinhua Pan, oo ah ku-xigeenka maareeyaha guud ee waaxda ganacsiga tareennada, ayaa hadal jeedisay, oo soo dhaweysay khabiirka SATCO revi ...
Dagaalkii SONGZ ee Indonesia ka dhanka ahaa COVID-19 sanadkii 2020
Bilowgii sannadka 2020, COVID-19 wuxuu u qarxay qaab dhan walba ah, isagoo bilaabay la dagaallanka adduunka ee ka dhanka ah cudurrada faafa. SONGZ Indonesia, iyada oo ah warshadda dibedda ee saamiyada SONGZ, waxay si firfircoon ula dagaallamaysay COVID-19! Dadka SONGZ dib ugama laaban, way midoobeen waxayna u adeegsadeen ficilladooda kuwo ...
Dhacdooyinka Horumarinta ee Kooxda SONGZ
1. 1998, SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING CO., LTD. waxaa lagu aasaasay magaalada Shanghai. SONGZ waxay ka bilaabatay meheradda basaska qaboojiyaha, waxayna ka bilaabatay eber. 2. Bishii Diseembar 7, 2004, waxaa la aasaasay Xiamen SONGZ, oo diiradda saaraysa R&D, soo saarista unugyada qaboojiyaha basaska. 3. Sannadkii 2004, S ...
“Macaamiisha Ugu Horreysa” -SONGZ Kooxda shaqadeeda dibedda inta lagu gudajiray COVID-19
Jiilaalkii la soo dhaafay iyo gugan, cudur sambabka ah oo aan la sii saadaalin karin ayaa adduunka ku fiday. Intii lagu gudajiray dagaalkan “faafa” lama filaanka ah, SONGZ Group ma aysan joojin xawaare u gaar ah, waxayna si firfircoon u furtay shaqadii inta lagu gudajiray COVID-19, iyadoo had iyo jeer la hirgaliyo mabda'a macaamiisha marka hore. Haddii ay dhacdo in ...
“Marka hore macmiilka ku adkeyso, qalbi ugu adeeg” - “SONGZ Kooxda ninka ugu quruxda badan ee dib u habeynta sameeyay” Fule Yuan waxqabadkiisii ​​fiicnaa
2020 waa sanad aan caadi ahayn. COVID-19 wuxuu ka socdaa adduunka oo dhan, qeybaha kala duwan ee noloshana saameyn xoog leh ayey ku leeyihiin. Waaxda ganacsiga basku waxay leedahay geesinimo ay ku wajahdo dhibaatooyinka oo ay uga adkaato, had iyo jeerna uhogaansanaato macaamilka marka hore, marwalba lasocoto baahiyaha macaamiisha, u feejignaada uguna adeegto ...
SONGZ Group ayaa ku guuleysatay cinwaanka "2020 Excellent Supplier" oo ay bixisay SANY
Dhawaan, Shirka 2020 "Shirka Shirkadaha Soo Saarida Mashiinada culus ee SANY" iyo "SANY Heavy Machinery Co., Ltd. Shirkadaha Alaab-qeybiyaha" ayaa si gooni gooni ah loo qabtay. SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING CO., LTD. ayaa ka dhex muuqday alaab-qeybiyeyaal badan waxaana lagu qiimeeyay inuu yahay "alaab-qeybiyaha wanaagsan" ....
SONGZ In 1 BUSWORLD Latin America
Laga soo bilaabo 5 ilaa 7 Diseembar 2016, Busworld wuxuu abaabulay daabicitaankiisii ​​ugu horreeyay ee Busworld Latin America. Bandhigu wuxuu ka dhacay Duqa Magaalada Plaza ee magaalada Medellin, oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Kolombiya. Wadar ahaan, 32 baabuur waxaa soo bandhigay Daimler, Scania, GM Isuzu, Busscar, Volvo, Dragon Dragon, Inconcar ...